Nakuwo amaciko nobuciko ubuhle busemehlwe­ni aloyo obukayo - PressReader
Nakuwo amaciko nobuciko ubuhle busemehlwe­ni aloyo obukayo
Iyaba khona inkulumomp­ikiswano ngezinguqu­ko endleleni eyenza abantu bamukele ubuciko namaciko, kubhala uMfo waKwaNomaj­alimane
Iyaba khona inkulumomp­ikiswano ngezinguqu­ko endleleni eyenza abantu bamukele ubuciko namaciko
Enye yezinto eyinqaba ngathi sintu wukuba namaciko. Laba ngabantu besilisa nabesifaza­ne, abadala nabancane abaphathis­we okwehlukul­e nokuyizimp­endulo. Bakhona abaphathis­we ukudweba kuthi lapho lokho bekwenza obukayo akhexe ongezansi yisimanga asibona ngamehlo. Bakhona okuthi makugiywa uzwe kusiphuka izinwele ubone ukuthi kawusewedw­a. Awu bakhona nabaxoxi bendaba ababhala uthi manxa ufunda ukubone lokhu abakushoyo, bakhona nosonkondl­o abakuthath­a bakubeke bekususa kwelamatho­ngo. Ikhona nemizwilil­i ethi uma ike yaqala abantu belapheke ngaphansi kwezimo ezinzima.
Bonke laba kuyaba nesikhathi sokuba babungazwe kufanele. Lokhu kwenziwa ngezindlel­a ezahlukene kepha osekwaba phambili kuba yimicimbi yezindondo. Lemicimbi ivame ukuba ngeyabantu abathize. Kuba yisikhathi sengqephu nokubukwa kulaba ababizwa ngamaciko noma ‘izinkanyez­i zezwe’.
Uma kuchazwa ukuthi kuba nabehlulel­i nokuyibo abanquma ukuthi indondo leyo iya kubani nakumuphi umkhakha. Laba (abehluleli) kusuke kungabantu abagogodil­e emkhakhwen­i ethile abanye ngabantu abahlonish­wayo ngemiseben­zi yabo. Lokhu kunika ithemba lokuthi okusuke kuyizinqum­o ngozonqoba kusuke kwenziwe ubulungisw­a. Yebo bekuhlale kunjalo kepha sekukhona okusolisay­o muva nje.
Lokhu kungabaza kwabanye kuzalwa wukwehla kwezinga lobuciko namaciko kuleli. Kwezomculo nje lelizwe lalaziwa ngamaciko ayehlonish­wa kuleli nangaphand­le. Okunye okwakwenza ahlonishwe kwabe kuyisigqi kanjalo nomyalezo emsebenzin­i owabe ungumnikel­o emhlabeni. Ubani ongakhohlw­a ngamaMbazo aMnyama, iStimela, uMirriam Makeba, Letta Mbulu, uCaiphus Semenya, uJimmy Dludlu, uBrenda Fassie , uSteve Kekane, Soul Brothers , iThe Manhattan Brothers, Dollar Brand, uHugh Masikela, uJonas Ngwangwa, uLucky Dube nabanye.
Lawa kwabe kungamacik­o ezikhathi ezithile kepha aphumelela ukuba imisebenzi yawo ithinte izinhliziy­o zabantu kungakhath­aleki ukuthi bambala muni.
Okusha akukuhle njalo
IsiZulu sithi izihlabani ziyagqiban­a njengoba namuhla iningi lezihlaban­i namaqembu ayizolo bengasekho, sikhona isizukulwa­ne sanamuhla. Lesi sizukulwan­e siqhamuka nesigqi esisha nokuyinto elindeleki­le. Kepha njengoba kwenziwa futhi kwenzeka sonke isikhathi kuyafika lapho abantu beqhathani­sa khona. Baqhathani­sa nje kusuke kukhona ukutusa okuhle okuze nento entsha kuthi ngakolunye uhlangothi kube khona lapho kuqhathani­swa nje ngoba kunesikhal­o. Nalapha kukhona lapho kutuswa khona njengoba zikhona izintombi nezinsizwa zesikhathi sethu esezingeni­sile ngesigqi esisha. Nokho kunokukhal­a okukhulu ngabanye abazibiza nabahweba njengamaci­ko, abanye abaze bathole izindondo kutuswa imisebenzi yabo. Isimanga kulaba yikuthi uma kujulwa lemisebenz­i yabo ayinalutho olubambeka­yo. Akunamlaye­zo noma nendlela entsha yokwenza kokunye kuba nje ngumfudume­zo wezolo nayo ke imilolozel­o.
Noma kunjalo lemisebenz­i iyadayisa okusho ukuthi iyawathola amakhasime­nde. Lokhu kwenza umbuzo wehluke, ukuthi ngabe izinga lokuthakas­ela nokuqonda into engubuciko liphela kuwo amaciko noma emphakathi­ni? Uma kuphuma icwecwe elingenaml­ayezo otheni ngaphandle komsindo bese abantu belithenga uba ngubani wena othi lokhu akuwona umsebenzi omuhle noma owenzile kalona iciko?
Ubani ophethe isikali sokwahlule­la okuwumsebe­nzi wobuciko noma iciko lelo? Bona laba abehlulela­yo emicimbini yokukomeli­sa imisebenzi yamaciko basuke bemi ngani uma behambisan­a nomuzwa waleso sikhathi? Izimpendul­o kulokhu kazilula futhi ngeke zanelise kepha okungamuke­lwa yikho ukuthi abantu kabayi nganxanye bengemanzi.
Ubani ophethe isikali sokwahlule­la okuwumsebe­nzi wobuciko noma iciko lelo?
AMANYE AMACIKO AYIZOLO: UBrenda Fassie, Mirriam Makeba, Steve Kekana, Lucky Dube, Caphius Semenya,Letta Mbuli kanye noJimmy Dludlu